Siri na-atụ aro ka anyị zụta ihe nkiri "Anu ulo" na ya iTunes ọrụ | Esi m mac
Siri na-atụ aro ka anyị zụta ihe nkiri «Pets» na ọrụ iTunes
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | iTunes, Noticias, ọtụtụ
The Christmas ememe na-eru nso na Apple na-akwadebe ya niile nka nke mere na anyị na-eji a ole na ole obi ụtọ ụbọchị na N'ezie, na anyị na-aga site na ndenye ọpụpụ na ihe si ya nso nke ngwaahịa.
Oge a ọ na - arụ ọrụ na ọrụ abụọ ya: Siri na iTunes. Ruo ugbu a enweghi ọtụtụ ozi, n'ihi na anyị nwere ike ịjụ Siri na Apple Tv, iPad ma ọ bụ iPhone ka ha tụlee ihe nkiri iTunes na otu atụmatụ. Mana site taa, Apple site na Siri na-akwalite ihe nkiri ahụ Mascotas site na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nkiri Universal Pictures.
The iTunes twitter akaụntụ posted:
Siri maara ihe anụ ụlọ gị na-eme mgbe ị naghị anọ n’ụlọ. Jụọ ya!
Na twitter anyị hụrụ njikọ nke na-eduga anyị na peeji ihe nkiri na iTunes, mana ebe a Anyị na-etinye njikọ maka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta n'onwe gị. Na ibe anyị nwere ike ịchọta ụdị trailers nke obere nkeji na-akwalite ihe nkiri ahụ.
Kaosinadị, ihe ọhụụ nke Apple bụ nkwalite ihe nkiri mgbe anyị jiri Siri. Ma ọ bụ na onye inyeaka a anaghị akwụsị ito yana na usoro ndị mmanye. Ihe nwute bụ na n'oge ahụ naanị na United States, mana Siri zara na ihe nkiri ahụ mgbe anyị jụrụ:
Siri, gini ka anu ulo m n’eme mgbe m na anoghi n’ulo?
Ruo azịza 15 dị iche iche Siri ahazila mgbe anyị jụrụ ajụjụ ahụ.
Typedị ajụjụ a nye Siri nwere ike ịdị ka ọ dị ntakịrị, ma ọ bụ na anyị enweghị ike ichere ịjụ onye enyemaka Apple ịjụ. Ma enwere ngalaba nke "nwere njikọ" na Siri ma nke ahụ kwekọrọ na ndị na-ege ntị na fim ndị a na-emegharị anya. Ndị a bụ ụmụntakịrị, ndị na-eche Siri dịka "enyi" onye na-enyere anyị aka na nchikota, lee etu ihu igwe ga-adị ma ọ bụ otu otu egwuregwu bọọlụ m siri dịrị. Apple nwere ike iche banyere ha mgbe ha na-eme Siri maka ihe nkiri.
Ya mere, Apple ziri ezi na omume ndị a ma anyị na-arịọ gị ka ị nwekwuo mmiri n'ime ụbọchị anyị taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Siri na-atụ aro ka anyị zụta ihe nkiri «Pets» na ọrụ iTunes
Nwere ike were nkwekọrịta Apple Music na ọkara ọnụ ma ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ
Apple Pay ga-abia echi na Spain n'aka Banco Santander